कैलालीमा एमालेको समानान्तर कमिटी « Anumodan National Daily
कैलालीमा एमालेको समानान्तर कमिटी
प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७७, शनिबार १८:४९
धनगढी । नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले कैलाली जिल्लामा सामान्तर कमिटी विस्तार गरेको छ ।
नेकपा एमाले माधव समूहले शनिबार धनगढीमा कैलाली जिल्ला स्तरीय विस्तारित बैठक आयोजना गरी दीर्घबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी विस्तार गरेको हो । २०७५ जेठ २ गतेको बैठकबाट गठित कमिटीलाई नै क्रियाशील बनाउँदै पदाधिकारीहरुको कार्यविभाजन गरेको नेता विमल जोशीले बताए ।
उनका अनुसार चार जना उपाध्यक्ष, एक जना सचिव, ९ जना सहसचिव गरी एक सय ७५ जनाको जिल्ला कमिटी बनाइएको छ । उपाध्यक्षमा कर्ण जैशी, भैरव रावल, केवालाल चौधरी र कलावती जोशी चयन भएका छन् । सचिवमा विमल जोशी, उपसचिवहरुमा शिवराज विनाडी, प्रेम चौधरी, चुनकुमारी चौधरी, लोकेन्द्र शाही, सुर्यचन्द्र भट्टराई, लोकबहादुर सारु, दिलबहादुर विक, खडक रावल र बखत विष्ट चयन भएका छन् ।
भेलामा नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावल, एमाले केन्द्रीय सदस्य गरिमा शाह र झपट रावल लगायतका अतिथिहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा नेता डा. रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले देश नै अन्यौलतामा धकेलिएको बताए । यो बेला पार्टी एकता अत्यावश्यक रहेको भन्दै उनले पार्टी भित्र मिलेर प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध लाग्नु पर्ने बताए ।